Blanket: Ngwa bara uru maka ịkpọ ụda ikuku na ndị ọzọ | Site na Linux
Blanket: A bara uru ngwa n'ihi na-akpọ ihere ụda na ndị ọzọ
Taa, ọtụtụ mmadụ na - eji kọmputa arụ ọrụ mgbe niile, ma ọ bụ maka ọrụ, ọchị ma ọ bụ naanị iji zuru ike. Ma mgbe nke ahụ mere, ha na-ejikarị otu ihe ahụ gee egwu ma ọ bụ nanị na-ege ntị mma ndabere ụda maka ọrụ achọrọ. Mgbe ụfọdụ, ha na-eji weebụsaịtị weebụ na oge ndị ọzọ ọkpụkpọ dị mfe.
Otú ọ dị, mgbe ọ na-abịa egwu mfe ma dị ụtọ ndabere ụda ma ọ bụ abụ dị mfe na pụrụ iche ma ọ bụ abụ, a na-akpọ ngwa ahụ Blanket ọ nwere ike ịbụ ụzọ ọzọ bara uru maka nke a.
Tupu, tinye zuru ezu ịza ajụjụ na Blanket, ọ bara uru ịmara na maka otu ebumnuche a, ngwa ahụ «Igweisi», ọ bụrụhaala na ejikọtara gị na ịntanetị, ebe ọ na-enye gị ohere igwu vidiyo Internetntanetị na ụda olu ma ọ bụ egwu na-enweghị mgbasa ozi mgbasa ozi.
"Igweisi bụ ihe ọkpụkpọ egwu dị mfe maka Mac, Windows, na Linux nwere nchọgharị na YouTube, ihuenyo ụlọ nwere ndepụta ewu ewu site na ụdị na oge, ma kachasị mma, redio nke Reddit kwadoro. Ekweisi na-ewe egwu nke ihe karịrị 80 music sub-reddits na-akọrọ, na-akọwa ha, ma na-egwu ha na akpaghị aka. Ọ bụ a jụụ na nnọọ pụrụ iche ụzọ chọta ọhụrụ music dị ka ọ na-ahọrọ ndị ọzọ mmadụ dị ka gị na ọ bụghị site algọridim." Isi: Egwuregwu egwu na-esi na YouTube na Reddit
1 Blanket: App maka egwu na-akpọ ndabere ụda
1.1 Gịnị bụ blanket?
Blanket: App maka egwu na-akpọ ndabere ụda
Gịnị bụ blanket?
Dị ka gị gọọmentị webụsaịtị na GitHub, Blanket, a obere na mfe ngwa a kọwara dị ka ndị a:
"A bara uru ngwa na-ege ntị dị iche iche ụda. Da nwere ike melite ịta ma mee ka onye ọrụ rụpụta ihe. Ma ọ bụ na ha na-ekwe ka ha hie ụra n'ebe mkpọtụ."
Ugbu a, Blanket na-aga maka mbipute ahụ "0.4.0" ma nwee n'etiti ya kasị pụta ìhè atụmatụ ndị a:
Nice, dị mfe ma na eserese eserese interface: Ebe enyere onye ọrụ ya obere nchịkọta nke ụda gburugburu ebe obibi (Ọdịdị, njem, ime, mkpọtụ na omenala) enwere ike imegharị ya site na iji ihe mmịfe olu ya iji dozie ogo olu achọrọ na uto nke onye na-ege ntị. Na ihe bara ezigbo uru bụ na, ọ na-enye gị ohere igwu egwu ọtụtụ gụnyere ma ọ bụ gbakwunye ụda n'otu oge, iji nwee ike ịme ngwakọta ahaziri na uto nke onye ọrụ ọ bụla.
Ndabere playback na mmalite: Iji zere mmekọrịta na eserese eserese. Na-amalite ya, na-akpọ ikpeazụ ji ụda nhazi. Ọ na-enye gị ohere ịga n'ihu na-egwu ntọala ndị a mgbe emechiri ngwa ahụ.
Uzo mkpirisi keyboard: Maka nkasi obi, ngwa na ngwa nke ngwa site na keyboard.
Methodszọ dị iche iche enwere ike iji maka nbudata ya, ntinye ya na ojiji. Dịka ọmụmaatụ, site na nchekwa ma ọ bụrụ na anyị nwere Distro njiko na OpenSuse, site na Ebe nchekwa PPA ọ bụrụ na anyị nwere otu Ubuntu Distro ma ọ bụ ụfọdụ ihe nrụpụta ma ọ bụ dakọtara, site na Flatpak, n'ikpeazụ, budata ya wee chịkọta ya site na ọkọ.
Maka ikpe anyị bara uru taa, anyị ga-ahọrọ ụzọ ikpeazụ, ebe ọ bụ na, ọ bụ anyị na-emebu MX Linux Respin akpọ Ọrụ ebube, ọ bụ ezie na ọ na-anabata Ebe nchekwa PPA,, anyị ga-eji aka anyị tinye igodo nchekwa, ọ bụ ezie na ọ na-anabata Flatpak, nke a na-etinye ntọala dị arọ mgbe niile maka ịrụ ọrụ nke ngwugwu.
Ya mere, ihe mbụ bụ ibudata na unzip ndị faịlụ "tar.gz" nke mbipute "0.4.0". Mgbe ahụ tinye onwe anyị n'ime folda ahụ «~/Descargas/blanket-0.4.0» na a mgbọrọgwụ ọnụ. Ma mezuo iwu iwu ndị a:
Ọ bụrụ na nchịkọta niile dị n'ahịrị izizi dị ma wụnye ya nke ọma, enwere ike mepee ngwa ahụ. Blanket nsogbu adighi na gi GNU / Linux Distro. N'ọmụmụ ihe anyị, ọbá akwụkwọ ahụ «libhandy-1-dev» Ọ bụghị na nchekwa anyị, n'ihi ya, anyị ebudatara ya ma wụnye ya na faịlụ ndabere ya («gir1.2-handy-1_1.0.0-2_amd64.deb, libhandy-1-0_1.0.0-2_amd64.deb y libhandy-1-dev_1.0.0-2_amd64.deb») site na ndị a njikọ ma anyị wụnye ha site na iji iwu iwu na-esonụ:
Mgbe nke a gasịrị, anyị nwere ike igbu Blanket si Ngwa ngwa, nyochaa ya ma jiri ya mee ihe. Dị ka a hụrụ na foto ndị a:
N'ikpeazụ, maka ndị chọrọ ibudata ụfọdụ ụda na-enweghị akwụ ụgwọ na-eto eto ọnụ ọgụgụ nke nsonaazụ sitere na Blanket, ị nwere ike ibudata ụfọdụ n'ime ihe ndị a njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Blanket», obere ihere na-ada ụda ngwa, na ndị ọzọ multimedia ụda faịlụ na music dị iche iche formats maka ndabere mmeputakwa na anyị free na-emeghe Operating Systems; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Blanket: A bara uru ngwa n'ihi na-akpọ ihere ụda na ndị ọzọ
Nwere Obi Ike wardsgwọ ma ọ bụ otu esi abanye ụwa nke cryptocurrencies na-etinyeghị ego gị n'ihe egwu